I RAVONINJATOVO - izy sy ny asa misiona nataony
Rehefa vita fianarana tany izy dia notendrena hampianatra any Marotampona FFMA. Naka tokan-trano izy ka izany Ratompo izany no vadiny. Tsy niteraka izy mivady.
Nafindra nampianatra tao Tsiandramana izy, tsy nety nandeha ny vadiny, dia nisaraka ry zareo. Dia naka an-dRazanajato (Andohavondrona) izy ho vadiny. Ka dia teny an-tsena talata no nazahoany azy. Teto Anosilava no nipetraka izy, mamonjy fampianarana isan’andro, noho i Razanajato tsy mety ho eny Tsiandramana hitoetra sy hipetraka.
Indray andro, fahavaratra, nisy orambe, tondraka ny reniranon'i sahomby, nody avy any Tsiandramana izy. Voatery nilomano, noesorina ny akanjo, niboridana, nony tafita dia nifanena tampoka tamin’ny Misionera, Mrs PIM dia raikitra ny fanadihadihana :
- "Fa ahoana izao? ho aiza ianao ?", hoy ny Misionera,
- "Ndeha hody aho tompoko", hoy ny anao lahy,
- "Tsy fantatrao fa fahavaratra izao? Misy tsy salama angaha ny ray aman-dreninao?"
- "Tsia tompoko".
- "Koa hanao inona aty ianao ?"
- "Aty izahay no mipetraka tompoko, fa izaho mamonjy ny fampianarako isan’andro."
- "Tsy maintsy mipetraka aty Tsiandramana ianao, ento ny vadinao.", hoy ny baikon'ny Misionera namarana ny resany.
Noresahina tamin’ny tokan-trano ny fihaonana tamin’ny Misionera. Tsy misy hevitra hoy Ramatoa, eto ihany aho. Dia any amin’ny asany Ramose, Ramatoa eto an-tanana. Henon’ny Misiona ny toe-javatra, noheveriny ho misao-bady Ramose, dia noesorina tamin’ny asany izy sady naongana fa misao-bady foana.